Waalid – Halis kasoo gaartay Ubadkooda awgeed – Dacwo ka ah shirkad sameysa Fidiyow-gameka! | Radio Himilo
Home / Caruurta / Waalid – Halis kasoo gaartay Ubadkooda awgeed – Dacwo ka ah shirkad sameysa Fidiyow-gameka!
Waalid – Halis kasoo gaartay Ubadkooda awgeed – Dacwo ka ah shirkad sameysa Fidiyow-gameka!
Posted by: Mahad Mohamed June 2, 2020
Himilo – Qoys Shiinaha ku nool ayaa dacwad ka gudbinaya shirkad sameysa muqaallada game-ka ay carruurtooda ku ciyaaraan kaddib markii laba carruur ah oo ay dhaleen ku sigteen inay u dhintaan fal ku dayasho ah oo ay ka arkeen game-ka.
Ilmahan ayaa isku dayay inay dhismo weyn uga dul boodaan dhismo kale – tallaab u muuqata inay kaga dayanayeen muqaalkii ay ku arkeen fidiyow-game-ka.
Waalidkooda ayaa usoo iibiyay mobilo ay ku ciyaaraan, laakiin waxay la gaartay halkii ugu xumeyd kaddib markii ay qabsimeen fidiyow game-ka.
Toddobaadkii tagay si kastaba, ilmaha oo kala ah 9 jir iyo 11 jir, waxay isku dayeen inay ka boodaan dhismo 50 cag kor u dheer si ay u ogaadaan inay nolosha kusoo laaban doonaan iyo in kale, sida ay ka arkeen game-ka.
Waxaa runtii dhacdadaas kasoo gaaray dhaawac aad u daran. Lafo badan ayaa ka jabay, waxaana ay u baahdeen marista qaliimo kala duwan.
“Aniga iyo walaashay waxaan fiirinaynay haddii aan boodno inaan dhulka tagi karno inaga oo aan dhiman sida aan ka aragnay game-kii aan ciyaaraynay,” ayuu yiri wiilka oo 11 jir ah. “Walaashay markii hore way cabsatay, waxaana ku dhahay indhaha isku qabo, waana wada boodnay; mana aqaan wixii dhacay markaas kaddib.”
“Waxaan rabnay inaan duulno innaga oo aan dhiman sida Game of Peace iyo Mini World,” ayuu sii raaciyay. “Waayo si walba oo aad u duusho marnaba ma dhimanaysid.”
Aabaha dhalay labada carruur ayaa markii uu la kulmay gabadhiisa oo ku jirta xaalad naf la caari ah, ula cararay isbitaalka, wax yar kaddibna waxaa laga daba keenay wiilkiisa oo ku jira xaalad kasii daran.
Waxaa muddo maalmo ah lagu sameynayaa qaliin kala duwan iyo kabidda lafaha qaar ee jajabku soo gaaray.
Hooyada dhashay ayaa sheegtay in ilmaheedu ay weligood ciyaari jireen fidiyow-gameka balse aysan marnaba hadda kahor isku dayin inay ku daydaan.
Balse taniyo markii dhaawucu soo gaaray, wiilkan ayaa hadda ogaaday inuu jiro farqi weyn oo u dhaxeeyaa dhabta iyo dhalanteedka ku jira game-ka.
“Wax walba oo ku jira muqaallada waa been,” ayuu yiri. “Qofku mar kaliya ayuu dhintaa waana inuu nolosha ku mintidaa.”
Shirkadda sameysay muqaalladan ayaa ku gacan-seyrtay eedeynta kaga timdi labada waalid ee dhibanayaasha.
Previous: Klopp oo u sheegay Liverpool in wali tartanka horyaalka uusan dhammaan
Next: Massimo Moratti oo ka hadlay mustaqbalka Martinez ee Inter Milan
India: Buundo u gaar ah xayawaanada
Masjidka ugu bedka yar Dunida